[Umdwebo Wamafu Wokukhanya Kwenyanga] Ba Guocheng, Jiulongpo District & High-rise Korean-style Hardcover Apartment Xingxiang Lovers & Super Quiet Two bedroom & Near West Railway Station
Le ndlu itholakala ku-Huayuan Road, esifundeni saseJiulongpo, eChongqing, imizuzu engu-8 ukusuka esiteshini sikaloliwe esiseNtshonalanga. Ithule futhi izimele. Ifakwe umbhede wokhuni oluqinile, umatilasi othambile nombhede wosuku, ideski lasehhovisi, amapeni, okunamathelayo. amanothi, eshaweni khulula futhi imoto. Imikhiqizo, umshini wokuwasha, ama-TV, lamanzi esiphethu, itiye izikhwama, ikhofi, Slippers alahlwayo, smart ikhodi yokukhiya for check-in, Midea air-conditioning imahhala, isikhala likhulu, ezihlotshiswe kahle, ezokuthutha elula , futhi umgwaqo wokudla ungaphandle nje komphakathi.
Mhlawumbe kudingeka ngempela isikhala mahhala, kungakhathaliseki uma uwedwa ~ noma abangane uthole ndawonye ~ kumane indawo enjalo kungaba ukukunikeza indawo, umculo, ikhofi, itiye ~ esihlalweni lazy ukuthi umboza wonke umuntu, i-efudumele ingaphakathi, ukuncika kusofa noma kukhaphethi ngemicamelo, ukuthula nenkululeko ebesiyifuna.
Ikamelo lethu lifanele imibhangqwana emisha, odade kanye nabangane, futhi silungiselele imicamelo eminingi nama-quilts.
Indlu itholakala esifundeni saseJiulongpo, indawo ebukekayo yeCaiyun Lake Park eBa National City.
-Amafasitela asuka phansi kuya ophahleni, indawo enhle kakhulu, izindlu ezithengiswayo ezisezingeni eliphezulu edolobheni elikhulu, elibheke indawo ephambili yeNhlonhlo ye-Bali.
-Indawo ephakeme kakhulu, enezihlalo zokudlela eziqinile zokhuni, izipikha zeBluetooth, ukukhanya kwekhandlela, nokubuka okuhle ebusuku.
-Indawo enhle enkabeni yedolobha, iHongya Cave, Yangtze River Cableway, kanye nohambo lwemizuzu engama-20 ukusuka esiteshini esingaphansi komhlaba.
-Ukuhlobisa okusezingeni eliphezulu, kuhlanzekile futhi kucocekile
-I-TV, izipikha ezihlakaniphile, isiqandisi, yonke into
-Ikhofi yamahhala netiye, ungajabulela indawo yaseChongqing ngasefasiteleni
-Igumbi lesitayela se-tatami lesitayela samaJapani elinombhede omkhulu oyimitha elingu-1.5, usofa oyivila, nesihlalo esincane setiye
-Izindawo zokulala ziyashintshwa futhi zihlanzelwe isivakashi ngasinye. U-anti wesikhathi esigcwele uzohlanza igumbi lapho ephuma, futhi umnikazi wendawo uzogada mathupha/aqinisekise izimo zokuhlanzeka.
-Ilungele ukuyothenga nokudla, futhi ezokuthutha yi-Ping'an Station yeMetro Line 2. Phansi kukhona ibhodwe elishisayo le-Chongqing, ama-noodle amancane, izikebhe, ukudla kwaseSichuan nezinye izibiliboco.
Eduze kuneSichuan Academy of Fine Arts, Caiyun Lake Wetland Park, ngena eJiefangbei, imizuzu engu-20 ukusuka eJiaochangkou, umugqa wethrafikhi 2 ngokuqondile, imigqa eminingi yamabhasi, ibhodwe elishisayo, umgwaqo wokudla waseSichuan uzungezwe.
Thanda ukuxhumana, wamukelekile